worm ဂီယာ Hose Clamp ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စွဲစေနှင့်ပိုက် Clamp > ပိုက် Clamp > worm ဂီယာ Hose Clamp
အဆိုပါ Worm ဂီယာ Hose Clamp ၏ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
ဒါ့အပြင်တီကောင် drive ကိုညှပ်သို့မဟုတ်ဂီယာညှပ်ကိုခေါ် worm ဂီယာညှပ်, တစ်ရေပိုက်သို့မဟုတ်ပြွန်ပူးတွဲခြင်းနှင့်ပိတျထားသောအဘို့အညှပ်၏အမြားဆုံးအသုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ worm ညှပ်တခါတရံသွားဘီးနဲ့ချိတ်ဆက်မယ့်တီကောင်လှည့်တစ်ခုအဆုံးအပေါ်တစ်ဦးဝက်အူအိမ်ယာနှင့်တကွ, slotted တစ်တီးဝိုင်းထားရှိရေး။ အဆိုပါညှပ်တဲ့ရေပိုက်သို့မဟုတ်ပြွန်ပတ်လည်မှာနေရာချသည်နှင့် helical-ပေါင်းလိုက်သောဝက်အူကတီးဝိုင်းဟာရေပိုက်န်းကျင်တင်းကျပ်စေတဲ့ပိုးအဖြစ်ပြုမူ, လှည့်သောအခါ။ worm ဂီယာညှပ်မှန်မှန်, မော်တော်ကားလေကြောင်းနှင့်စက်မှု applications များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
worm drive ကိုရေပိုက်ညှပ်, စွယ်စုံအသုံးပြုရလွယ်ကူ, ပြန်သုံးနိုင်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရွယ်အစားနှင့်ပစ္စည်းများ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးအတွက်လာ။ သူတို့ချေးနှင့်ချေးကိုတှနျးလှနျသောကွောငျ့သံမဏိပိုးဂီယာညှပ်လူကြိုက်များကြသည်။ worm ညှပ်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်, သေးသေးလေး, High-torque, coated, အဏ္ဏဝါတန်းများနှင့်အာကာသအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်နှင့် MIL ဗားရှင်း spec ။ တစ်ဦးကတီကောင်ဂီယာရေပိုက်ညှပ်ပိုက်, အိပ်ဇော, pneumatic, ဒါမှမဟုတ်ပြွန်အပါအဝင်ရေပိုက်များစွာသောအမျိုးအစားများအပေါ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Worm ဂီယာ Hose Clamp ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
7/16 & quote; - 3/4 & quote; အားလုံးကို
7mm max ကို
26mm max ကို
သွပ်ရည်စိမ်သံ, သံမဏိ 201, သံမဏိ 301, stainlesssteel 304, သံမဏိ 316
စသည်တို့ကိုအိမ်ထောင်စု, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများ, ဆောက်လုပ်ရေး, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေး, သင်္ဘောများ, များအတွက်ရေပိုက်အသင်းတော်များ
အဆိုပါ Worm ဂီယာ Hose Clamp ၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
ကုန်ပစ္စည်း Features:အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်, အားကြီးသောစွဲစေနိုင်စွမ်းနှင့်ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို
လျှောက်လွှာ:worm ဂီယာညှပ်မှန်မှန်, မော်တော်ကားလေကြောင်းနှင့်စက်မှု applications များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ရေပိုက်ညှပ်ပိုက်, အိပ်ဇော, pneumatic, ဒါမှမဟုတ်ပြွန်အပါအဝင်ရေပိုက်များစွာသောအမျိုးအစားများပေါ်တွင်သုံးနိုငျတစ်ဦးကတီကောင်ဂီယာ
အဆိုပါ Worm ဂီယာ Hose Clamp ၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
1. Inner Pack: 1piece / ကြားနေ polybag
2. ပြင် Pack: ဇင် / ကြားနေကတ်ထူပြားသေတ္တာ
3. စုစုပေါင်း WEIGHT / ပြင်ပုံး: 25KG
4. ပြင်ပုံးရရှိနိုင်အရွယ်အစား: 28X24.5X17.5, 37X28X21, 38.5X38X21, 55x47x45, 55X47X30, 58X38X19, 47X36X30, 38X38X38, 102X36X30 (CM)
5. Standard သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း Mark: တပ်ဦး Marks နှင့်ဘေးထွက် Marks တစ်ခုချင်းစီကိုပြင်စက္ဏူထူသို့မဟုတ် pallet ပေါ်အကြောင်းအရာအပိုင်းကုဒ်, အပိုင်းအမည်, အရည်အတွက်, Net ကအလေးချိန်, စုစုပေါင်းအလေးချိန်, ပုံးအရွယ်အစားနှင့်ပုံးနံပါတ်ပါဝင်သည်
6. ငါတို့သည်လည်းလိုအပ်ပါလျှင်ထိုကဲ့သို့သောအရောင် polybag, အရောင်သေတ္တာများ, တံဆိပ်စတစ်ကာများအဖြစ်, စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဝတ်ပြုနှင့် (ကုသမှုလက်မှတ်နှင့်အတူမဟုတ်သော fumigation pallets, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်းသစ် pallet) ထုပ်ပိုး pallet ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, အပြင်စက္ဏူထူခြင်းနှင့် pallets ရုပ်ရှင်ထုပ်နိုင်ပါတယ် မမျှော်လင့်ဘဲရေကြောင်းခွအေနအေကြုံတွေ့မှု၌ရေအထောက်အထား၏ရည်ရွယ်ချက်
hot Tags:: တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်း worm ဂီယာ Hose ညှပ်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality